Ifomu yeSicelo soKhuseleko lweNtlalo SS-5: Indlela yokufumana ikopi
Amanyathelo okucela ikopi yeFomu SS-5 yoMntu oMntu oMntu
Emva kokuba ufumene ukhokho wakho kwi- Index yoKhuseleko loLuntu , ungafuna ukucela ikopi yesicelo seNkxaso yoLuntu yasekuqaleni. Ingxelo egciniweyo yeenkcukacha zofuzo, i-SS-5 yifom yesicelo esisetyenziswe ngumntu ukuba abhalise kwinkqubo ye-US Social Security.
Yintoni endiyifundayo kwiSicelo soKhuselo loLuntu (SS-5)?
I-SS-5, okanye isicelo seNombolo yoKhuseleko loLuntu uncedo olukhulu lokufunda ngakumbi ngabantu abafa emva ko-1960, kwaye ngokubanzi kubandakanya oku kulandelayo:
Igama elipheleleyo ngexesha lokuzalwa, kuquka negama lentombi
Ikhoyo dilesi yeposi
Ubudala ngexesha lokugqibela lokuzalwa
Indawo yokuzalwa (idolophu, isithili, i-State)
Igama elipheleleyo likaYise
Igama elipheleleyo likaMama, kuquka negama lentombi
Uhlanga njengoko kuboniswe ngumfaki sicelo
Ingaba umfaki sicelo ucele isicelo soKhuseleko loLuntu okanye uMhlalaphantsi wokuThatha umhlalaphantsi ngaphambili
Igama lomqeshi kunye nedilesi
Ngubani ovumelekile ukucela ikopi ye-SS-5?
Ngethuba nje umntu efile, uLawulo loKhuseleko loLuntu luya kunika ikopi yale Fomu SS-5, isicelo seNombolo yoKhuseleko loLuntu kunoma ubani owenza isicelo phantsi koMthetho weNkululeko yoLwazi. Baya kukhulula le fomu kubhaliso (umntu ongoNombolo yoKhuseleko loLuntu) nakubani na onolwazi lokukhululwa kolwazi esisayinwe ngumntu malunga nolwazi olufunwa ngaye. Ukukhusela ubumfihlo bodwa, kukho iimfuno ezithile ze-SS-5 izicelo ezibandakanya "ubudala obukhulu."
I-SSA ayiyi kunika ikopi ye-SS-5 okanye enye ingcaciso yokukhulula malunga nawuphi na umntu oneminyaka engaphantsi kwe-120 ubudala , ngaphandle kokuba unganikezela ubungqina obumkelekileyo bokufa (umzekelo, isitifiketi sokufa, ukufunwa kwezinto, inkcazo yephephandaba, okanye ingxelo yamapolisa).
I-SSA iya kuphinda ibenze amagama abazali bamnyama kwi-SS-5 ngaphandle kokuba unikezele ubungqina bokuba abazali bafile okanye zombini unomhla wokuzalwa ngaphezu kweminyaka eyi-120 edlulileyo. Baya kukhulula amagama omzali kwiimeko apho umnini-mnikazi kwi-SS-5 ubuncinane ubuneminyaka eyi-100 ubudala. Lo mqathango, ngelishwa, kunzima xa injongo yakho yokucela i-SS-5 kukufunda amagama kubazali!
Indlela yokucela ikopi ye-SS-5
Indlela elula yokucela ikopi yefomu ye-SS-5 yokhokho wakho ukusebenzisa i-Intanethi ngokuLawula uLoqo lweNtlalo:
Isicelo seNkcukacha yoKhuseleko loLuntu lweNkcazo ye-SS-5 .
Ifomu eprintiweyo yale fomu yesicelo se-SS-5 nayo iyafumaneka kwiimfuno zeposi
Ngaphandle koko, ungathumela (1) igama lomntu, (2) iNombolo yoKhuseleko loLuntu (ukuba iyaziwa), kunye (3) nokuba ubungqina bokufa okanye ukukhutshwa kolwazi olukhutshwe ngumntu osayinwe ngumntu malunga nolwazi kufunwa, ukuba:
300 N. Street Street
Phawula zombini imvulophu kunye nokuqukethwe kwayo: "UKUFUNA KWENKCUKACHA YOLWAZI" okanye "ISICELO SENKCAZELO."
Ukuba unika iNombolo yoKhuseleko loLuntu, umrhumo u-$ 27.00 . Ukuba i-SSN ingaziwa, intlawulo yi- $ 29.00 , kwaye kufuneka uthumele igama elipheleleyo lomntu, umhla kunye nendawo yokuzalwa, kunye namagama wabazali. Ukuba unenombolo yoKhuseleko loLuntu kwiirekhodi zeentsapho okanye isatifikethi sokufa, kodwa akakwazi ukufumana umntu kwi-SSDI, ngoko ndiyincoma ukuba uquke ubungqina bokufa kunye nesicelo sakho, njengoko kuya kubuyekiswa kuwe ngaphandle koko sicelo.
Ukuba umntu wazalwa ngaphantsi kweminyaka engama-120 edlulileyo, kufuneka kwakhona ufake ubungqina bokufa nesicelo sakho.
Ixesha eliqhelekileyo lokulinda lokufumana ikopi yeSicelo soKhuseleko loLuntu ngeeveki ezingama-6-8, ngoko lungele ubekezele! Izicelo ze-intanethi ngokukhawuleza zihamba ngokukhawuleza-ngokuqhelekileyo ngexesha lokuguquka kweeveki ezingama-3-4, nangona oku kungahluka ngokusekelwe kwimfuno. Yaye inkqubo ye-intanethi ayisebenzi xa ufuna ukunikela ubungqina bokufa!
UKimberly Powell, i-About.com's Genealogy Guide kusukela ngonyaka ka-2000, ngumgcini wezobuchwepheshe wobunikazi kunye nomlobi we "Yonke into ekhokelela kwi-Genealogy Online, kwi-3rd Edition." Cofa apha ukuze uthole ulwazi olungakumbi ngeKimberly Powell.
I-Chronicling America: Iimbali ze-American Newspapers
Admissions yaseYunivesithi yaseDePaul
I-Cosmos Isiqendu 12 Ukujonga iphepha lokusebenzela
Ukuqulunqwa kwexabiso Ukunyaniseka